Madaxweynaha Maamulka KMG Galmudug oo ka hadlay Mooshinkii laga keenay Xasan Sheekh |
Madaxweynaha Maamulka KMG Galmudug oo ka hadlay Mooshinkii laga keenay Xasan Sheekh
Malegra without prescription, cheap zithromax. Madaxweynaha Galmudug, C/kariin Xuseen Guuleed oo ku sugan Magaalada Cadaado ee Gobolka Galguduud ayaa ka hadlay Mooshinka ay xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Somalia ka keeneen Xasan Sheekh Maxamuud.
C/kariin Guuleed oo Warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay inaan xilligaan loo baahnayn in mooshin lagu Mashquulo; Laakiinse loo baahan yahay muddada yare e harsan in laga shaqeeyo howlaha harsan.
“Xilligaan ma wanaagsana in mooshin laga gudbiyo Madaxweyne Xasan Sheekh. Aniga waxaan u arkaa Mooshinkan mid dib u dhac ku keenaysa horumarka dalka sidaasi daraadeed xildhibaannada waxaan kula talinayaa inay joojiyaan,” ayuu yiri Guuleed.
Sidoo kale, Madaxweynaha Galmudug ayaa sheegay in dowladda Somalia looga baahan yahay inay si Wadajir ah dalka ku Gaarsiiyaan doorasho marka la gaaro sannadka 2016-ka.
Hadalka GUuleed oo ay si weyn isugu dhow yihiin Madaxweynaha Somalia ayaa kusoo beegmaya xilli shalay ay Mooshin ka dhan ah Madaxweyne Xasan Sheekh u Gudbiyeen Guddoonka Baarlamaanka Somalia, iyagoo ku eedeeyay Qodobbo dhowr ah oo ay ka mid yihiin inuu ku fashilmay hoggaaminta dalka.
Dhanka kale, Madaxweynaha Somalia Xasan Sheekh oo isagana ka Mooshinka ay ka gud-biyeen xildhibaannada ka hadlay ayaa sheegay in baarlamaanka looga baahan yahay inay shaqadooda dastuuriga ah qabsadaan, Wuxuuna Xubnaha ka Gudbiyay Mooshinka ku Til-maamay kuwo la yaqaanno siyaasad ahaan halka ay dalka kaga jiraan.
Ugu dambeyn, lama oga sida uu mooshinkan ku dambeyn doono, iyadoo qaar ka mid ah Xildhibaannadii Moshinkan Gudbiyay Xasan Sheekh ay sheegeen inay ku kalsoon yihiin in Mooshinkooda ay ku guuleysan doonaan.
– See more at: http://www.hiiraan.com/news/2015/Aug/wararka_maanta14-92624.htm#sthash.PAlWfkF1.dpuf